Posted by kelartha on Wednesday, March 30, 2011 / Labels: ဗဟုသုတ
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၀ခန်.က အထက်မြန်မာနိူင်ငံ တိုင်းရုံးစိုက်ရာမြို.ကြိးတစ်မြို.၌ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာသောဘာသာခြားသားအဖနှစ်
“ဖေဖေ ကျွန်မတော့တစ္ဆေဖြစ်နေပြီ၊အစားလဲမစားရဘူး၊အဝတ်လဲမရှိဘူး၊နေစရာလည်းမရှိဘူး။ ကျွန်မအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေးပါ”
ဟု ကွန်လွန်သူသမီးက ဖခင်ကြီးအားအိပ်မက်ပေးသည်။
နံနက်မှာပင်သူတို.ဘာသာထုံးစံအတိုင်းဘာသာခေါင်းဆောင်များကိုပင့်ဆောင်၍ကျွေးမွေးလှူဒန်းသည်။ သို.သော် ထိုနေ.ညမှာပင်_
ပင့်ပြီးလှူဒန်းပေးပါ” ဟု သမီးကထပ်ပြီးအိပ်မက်ပေးပြန်သည်။
ထိုအခါအဆိုပါဗုဒ္ဓဘာသာမိတ်ဆွေမှာဘာသာရေး၌ တက်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သူဖြစ်သည့်အတိုင်း“ဘုန်းကြီးများကို တက်နိူင်သမျှပင့်ပြီး
ဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းနှင့်သင်္ကန်းလှူပါ၊မလှူခင်သမီးနာမည်ကိုခေါ်ပြီး “သမီးရေ သမီးအတွက်ဆွမ်းနဲ.သင်္ကန်းလှူတော့မယ်၊ဖေဖေနဲ.အတူလှူဒန်းရအောင်၊တရားနာရအောင် အမျှလာယူရအောင်လာရောက်ပါ” လို.ခေါ်ပြီးနေရာပေးပါ။ဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းနဲ.သင်္ကန်းကိုရေစက်ချလှူဒန်းပြီးနောက်သမီးနာမည် အမျှ-အမျှ-အမျှယူပါလို. အမျှဝေပါ”
ဟု လှူနည်းလှူဟန်ကိုအသေးစိတ်လည်းရှင်းလင်းပြောပြသည်။လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှန်ကန်အောင်လည်း ကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးပင့်ပေးခြင်း၊အမျှဝေပုံကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်အစဆုံးကူညီပေးသည်။
“ဖေဖေရေ သမီးတော့အစားလဲစားရပြီ၊အဝတ်လဲဝတ်ရပြီ၊ဒါပေမယ့်နေစရာမရှိလို.ဟိုကပ်ဒီကပ်နေရတယ်၊ ဒါကြောင့်နေစရာနေရာမရှိလို.
နေစရာရှိအောင်လှူပါဦး” ဟုသမီးကအိပ်မက်ပေးပြန်သည်။သည်တစ်ကြိမ်မှာတော့ သမီးမှာယခင်ကနှင့်မတူဘဲပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နှင့်အဝတ်များကလည်းသစ်သစ်လွင်လွင်တောက်တောက်ပပဖြစ်နေသည်ကိုတွေ.ရသဖြင့်ဖခင်ကြီးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ
“ဖေဖေရေ သမီးတော့အစားလည်းစားရပြီ၊အဝတ်လည်းဝတ်ရပြီ၊ နေထိုင်စရာလည်းရပြီ၊ဒါပေမယ့်ဖေဖေပေးတဲ့အမျှကို သာဓုခေါ်ရတဲ့အတွက်သမီးဒီမှာမနေရတော့ဘူး၊အထက်ကိုသွားရတော့မယ်ဖေဖေရေ သွားပြီသွားပြီ၊သမီးသွားပြီ”
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သောမည်သည့်ဘာသာဝင်ပင်ဖြစ်စေကာမူ အထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပေတဒါနကိုနည်းကျကျ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှန်အောင်လှူဒန်းပြီးအမျှဝေပါက ကွန်လွန်သူ၌ကျိန်းသေမုချကောင်းကျိုးသုခကိုချက်ချင်းလက်ငင်းရရှိနိူင်ကြောင်းယုံကြည်မိပါသည်။